Amazon Prime Video dia mamotika ireo firaketana fampidinana rehetra ho an'ny tvOS | Avy amin'ny mac aho
Amazon Prime Video dia mamotika ireo firaketana fampidinana rehetra ho an'ny tvOS
Ofisialy izany. Amazon dia mamadika ny zava-drehetra kasainy ho fahombiazana. Ary izany dia aorian'ny fahatongavan'ny Amazon Prime Video mankany amin'ny Apple TV, serivisy vaovao Amazon nanjary ny fampiharana alaina indrindra amin'ny tvOS.
Tao anatin'ny roa herinandro monja, ny fampiharana ofisialin'ny serivisy fandoavam-bola an'ny Amazon nihoatra ny fanantenana rehetra napetraka ary na dia any Apple aza dia gaga izy ireo amin'ny vaovao. Amazon ampidiro amin'ny varavarana fidirana ny tontolon'ny audiovisual.
Amazon Prime Video, miaraka amin'ny fifaninanana henjana eo amin'ny tsena toa Netflix, HBO na Youtube, nahavita nahazo sehatra ary nahasarika ny sain'ny mpanjifa, fanatratrarana zavatra izay tsy nisy olona nahatratra teo aloha; manapotsitra ny rakitra fisintomana rehetra ho an'ny fampiharana Apple TV.
Na dia tsy manana tarehimarika marina aza ny zava-bita, tsy misy manakana ny zava-bitan'ny fampiharana atiny audiovisual an'ny Amazon: esory ny maro hafa miorina amin'ny sehatra, ary na ny an'ny Apple aza, ny laharana 1 amin'ny fampidinana ho an'ny tvOS.
Ny katalaogin'ny sarimihetsika sy ny andian-tsarin'ny fivarotana an-tsokosoko par dia mitentina € 19.95, satria tsy maintsy atao ny mpampiasa Premium raha te hankafy ity serivisy ity.
Izany dia manazava ny hevitra fa Amazon dia mpifaninana matotra amin'i Apple hatrany ary ireo rehetra te hanana toerana amin'ny fitrandrahana sy famokarana atiny audiovisual.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Amazon Prime Video dia mamotika ireo firaketana fampidinana rehetra ho an'ny tvOS
Apple dia manakarama mpitantana vaovao roa amin'ny fizarana horonantsary streaming